Waa maxay hababka daadinta giraanta xidhida? Waa maxay sababta uu u dillaacay? -CIXI DONGFENG SEALING&PACKING Co., Ltd
Waa maxay hababka daadinta giraanta xidhida? Waa maxay sababta daadad?
Waqtiga: 2021-11-25 Hits: 12
Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah alaabta giraanta shaabadda ee suuqa, kuwaas oo ku filan in ay ku wareeraan iibsadayaasha. Waxaa jira noocyo badan iyo tayo aan sinnayn. Doorashada badeecada giraanta shaabadaysan ee tayada liidata si dabiici ah
nama keeni karo saamaynta la filayo. Maaddada iyo qaaciddada labaduba waxay aad muhiim ugu yihiin tayada giraanta xirmada.
Alaabooyinka giraanta lagu xidho ee tayada fiican leh waxay badanaa leeyihiin muuqaal dhalaalaya oo nadiif ah iyada oo aan la isku dhejin, xumbo, burs, iwm.
sidoo kale la kulma heerarka iyo baahiyaha isticmaalaha. Doorashada giraan shaabad oo tayo wanaagsan leh ayaa si weyn uga caawin karta isticmaaleyaasha inay yareeyaan halista daadinta. Mawduucan soo socdaa wuxuu si faahfaahsan u qeexayaa dhowr faraanti oo shaabadood ah
hababka daadinta iyo sababaha daadinta:
Daadisyada caadiga ah ee giraangiraha xidhitaanka ayaa loo qaybiyaa afar nooc: daadinta interneedka, qulqulka dhexgalka, daadinta faafinta, iyo daadinta waxyeelada.
Sababo la xiriira cadaadis aan ku filnayn ee gasket ah, siman aan habboonayn ama qallafsanaanta dusha xidhiidhka interface keeni doonaa xaddi gaar ah oo daadanaya on interface shaabadeynta.
Sababtoo ah walxaha jilicsan ayaa badanaa ah fiilooyinka, waxay si sahlan u dhexgalaan dhexdhexaadinta, gaar ahaan marka la eego ficilka cadaadiska. Sababta oo ah ifafaalaha xididka, dhexdhexaadku wuxuu u dhexgeli doonaa meesha
dhinaca cadaadiska hooseeya, sidaas darteed daadinta dhexgalka ayaa dhici doona.
Diidmada faafinta waxaa loola jeedaa daadinta ay sababtay wareejinta walxaha dhexdhexaadka ah iyada oo loo marayo farqiga daboolka ama tuubada xididka ee walxaha daboolka ah ee hoos yimaada dardargelinta diiradda.
kala duwanaansho. Faafinta dhab ahaantii waa natiijada dhaqdhaqaaqa molecular oo inta badan maaha hal dhinac. Xaalad uu farqiga cadaadiska daboolku aad u yar yahay ama meel bannaan ah, waa lagama maarmaan in la bixiyo
fiiro gaar ah u leh inay dhacaan laba nooc oo dheecaan ah, sida dhexgalka iyo faafinta, walxaha si sahlan loo maro sida nitrogen iyo hydrogen, iyo walxo aad u sun ah iyo walxaha shucaaca.
Deegaanka shaqada ee qaybta shaabadeynta ayaa ah mid aad u adag, qallafsanaanta kulaylku waa mid aad u weyn, waxaana inta badan ay ku xiran tahay gariir, saameyn, rakibid aan habooneyn, xoog adag oo xad dhaaf ah, soo noqnoqda
Isticmaalka, qallafsanaanta isku-buuqa, isku-ururinta walaaca gudaha, dhaawac ka baxsan xoogga daalka, iyo gabowga maaddooyinka ay ka midka yihiin, xumaanta, iwm. waxay keeni doonaan dillaacyo wax duminaya. Daadisyada noocan oo kale ah ayaa badanaa ah
aad u daran, saameyntuna waxay noqon doontaa mid aad u daran. Waa lagama maarmaan in la xoojiyo ka-hortagga.
Hore: Intee in le'eg ayaad ka ogtahay xirmooyinka xirmooyinka?
Xiga: Waxa ugu weyn ee soo socda ee suuqa PTFE ee ballaarinaya